रोचक – Wow Sansar
समुन्द्र र महासागरमा विभिन्न प्रकारका जीव पाइन्छन् । कोहि धेरै क्यूट हुन्छन्, त कोहि छोएमात्रै मानिसको ज्यान जान सक्ने विषले भरिपूर्ण ।आज हामी तपाईलाई एक माछोको बारेमा जानकारी दिनेछौँ । जुन माछोलाई हामीले छोएमात्रै पनि हाम्रो ज्यान जान सक्छ ।यसको एक थोपा विषले एउटा शहर नै ध्वस्त हुन सक्छ । स्टोन फिशको नाम सुन्नु भएको छ भने यो त्यहि माछो हो, जसको एक थोपा विषले एउटा शहर नै ध्वस्त पार्न सक्छ । यो पनि पढ्नुहोस् :सपनामा रोइरहेको देख्नुको मतलव के ?:के तपाइले कहिल्यै सपनामा रोइरहेको देख्नु भएको छ ? यदि छ भने त्यसको मतलव के हो भन्ने बारेमा तपाईलाई जान्ने धेरै इच्छा भयो हो ?आज हामी तपाईलाई यही बारेमा जानकारी दिनेछौँ । स्वप्न शास्त्रका अनुसार सपनामा आफू रोइरहेको देख्नुको मतलव जीवनमा मान र सम्मान छिटै मिल्ने संकेत हो । उक्त सपनाले तपाइको परिस्थिति बदलिएर मान र सम्मान दिलाउँछ । आफू सपनामा
(भिडियो समाचारको अन्त्यमा छ)चर्को विरोध भएपछि माफी माग्दै सुधीर चौधरीले भने- ‘सगरमाथा नेपालकै हो, यसलाई कसैले खोस्न सक्दैन’ काठमाडौं, १ माघ । सगरमाथामा भारतले दाबी गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध भएपछि भारतीय टेलिभिजन च्यानल जीन्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले अन्ततः माफी मागेका छन् । चौधरीले सगरमाथाको सावैभौमिकतामाथि भारतले दाबी नगरेको र आफ्नो प्रस्तुतीबाट भ्रम फैलिएको भन्दै माफि मागेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अन्तर्वार्ता लिन नेपाल आएका चौधरी आइतबार बिना अनुमति हेलिकोप्टरबाट सगरमाथाको आधार शीवीर काला पत्थ्थर पुगेर सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने र जीन्युजले त्यो अभियान सुरु गरेको बताएका थिए । चौधरीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि बुधबार साँझ आफ्नो नियमित कार्यक्रममा चौधरीले नेपालीको भावनामा ठेस पुर्‍याउनु आ
एक मुखे रुद्राक्ष देख्ने बित्तिकै ॐ लेखि एक सेयर गर्दै पूरा पढ्नाले नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुनुका साथै शक्तिशाली वरदान पाइने , एक मुखे रुद्राक्षको दर्शन गर्नाले नसोचे`को ठाउँबाट धन लाभ हुने गर्दछ । बेवास्ता गरेमा “अशुभ” हुन सक्ला । एकमुखे रुद्राक्ष को वर्णन शिवपुराण`को रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिव`को प्रतीक पनि मानिन्छ र यस`लाई अत्यन्तै दु(र्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ ।। सिद्धियोग परेको बिहीबारका दिन आकाशबाट परेको पानी रुद्राक्षको फूलमा परी तत्काल बन्द हुँदा त्यसबाट एकमुखे रुद्राक्ष फल्न सक्छ भन्ने पनि शिवपुराण`को रुद्राक्ष महात्म्यमा उल्लेख छ । लोकश्रुति अनुसार, एउटा बोटमा यस्तो रुद्राक्ष १२ वर्षमा तीनवटा मात्र फल्छन् । जस`मध्ये एउटा आकाश र अर्को पातालमा जान्छ भने तेस्रोचाहिँ धर्तीमा रहन्छ । यो शिवरात्री, पूर्णिमा वा विशेष दिनमा मात्र प्राप्त
काठमाडौं । जब आफूले जन्माएका बच्चाहरुको बुवा नभएको बताइएपछि अचम्म मान्नु स्वभाविक नै हो । त्यतिबेला सबैको कुडिन्छ, रिस उठ्छ । यो बिषय ब्रिटेनको हो । ती व्यक्ति सफल व्यवसायी हुन् । ती मानिस अहिले तीन बच्चाको बुवा हुन् ।जसमा दुई बच्चाको उमेर अहिले १९ वर्ष छ । एकको उमेर २३ वर्ष पुगेको छ । २०१६ सालमा डाक्टरसँग जाँच गराउन पुगेका ती व्यवसायीले आफू बच्चाको बुवा बन्न नसक्ने थाहा पाएपछि अचम्ममा परेका छन् । उनले प्रहरी कहाँ निवेदन समेत दर्ता गराएका छन् । रिर्चडको जीन्दगीमा एकैछिनमा उतारचढाव आएको छ । उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए । मुद्धा जितेर उनले २ लाख ५० हजार पाउण्ड पाएका छन् । उनले बच्चाको बुवा को रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन चाहेका छन् । तर अदालतले ती व्यक्तिलाई गोप्य राख्न मिल्ने आदेश दिएको छ । श्रीमतीको यो चाल थाहा पाएपछि उनी चकित परेका छन् । रिचर्डले भनेका छन्,‘ जब मैले टेस्ट रिपोर्टमा लेखेको पढे
मानिसहरुको दाँत फट्टीएको पक्कै देख्नु भएको छ होला। यस्ता मानिसहरु हेर्दा तपाईलाई अजीब लाग्न सक्छ, तर फट्टीएको दाँतको बीचको अन्तरले तपाईको भाग्यसँग सम्बन्धित धेरै रहस्य खोल्छ। दाँतको बिचमा अन्तर भएका मानिसहरु सुन्दरताको दृष्टिकोणमा राम्रो मानिदैन तर समुद्रशास्त्रको अनुसार यस्तो मान्छे भाग्यशाली हुन्छ। दाँतको बिचमा अन्तर भएका मानिसहरु सुन्दरताको दृष्टिकोणमा राम्रो मानिदैन तर समुद्रशास्त्रको अनुसार यस्तो मान्छे भाग्यशाली हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूमा यी विशेषताहरू हुन्छन्: १. दाँतहरु बीचको अन्तरले यो देखाउँछ कि यस्ता व्यक्तिहरु धेरै खुल्ला विचार भएका र धेरै खुसी हुने खालका हुन्छन्। यी मानिसहरू आफ्नो मनको कुरा गर्न हि’चकिचाउँदैनन्।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** २. यदि नोकरी गर्ने मानिसहरुको दाँतहरू बीचको अन्तर छ भने, यी मानिसहरूले भविश्यमा उच्च सफलता प्राप्त गर्नेछन्। ३. समुन्
काठमाडौं, माघ १ । चराका पनि द,’श्मन हुन्छन् ? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर चराका दुश्मन चराहरु मात्रै नभएर मानिसहरु पनि हुने गरेका छन् । जसको उदाहरण अमेरिकाबाट उडेर अस्ट्रेलिया पुगेको परेवा हो । अस्ट्रेलियामा जो नाम दिइएको एउटा अमेरिकी परेवालाई त्यहाँका अधिकारीहरुले मार्ने भएका छन्। १३ हजार किलोमिटर उडेर अस्ट्रेलिया पुगेको अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । अमेरिकामा ‘पिजन रेसिङ’मा समेत सहभागी भएको यो परेवाको मूल्य १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएको बताइएको छ । हालै अमेरिकाबाट हालै अस्ट्रेलिया आएकाले यस परेवाको नाम अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपतिकै नाम मिलाएर राखिएको छ । खासमा यो परेवाले अमेरिकाबाट उडेर अस्ट्रेलिया पुग्दा त्यहाँ पनि कोरोना सं’क्रमण फैलाउने डरले उसलाई सँधैका लागि विदाई गर्न खोजीएको हो । नियन्त्रण गरेर क्वारेन्टिनमा राख्न नसकिने भएकाले यसलाई सँधैका लागि वि दा गर्न
काठमाडौँ । यो वर्षको माघे संक्रान्ति निकै फलदायी रहेको छ। यस दिन मकर राशिमा पाँच ग्रह एकै साथ रहेने भएका कारण निकै फलदायी मानिने ज्योतिषशास्त्रीले बताएका छन्। साथै यो दिन दानको पनि विशेष महत्व हुने गर्छ। पण्डित मशेष तिवारीका अनुसार मकर सक्रान्तिमा देवताको दिनको उदय हुने र पर्वको रात मानिने गरिन्छ। सर्य मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएका कारण यसलाई उत्तरनारायण पनि भनिन्छ। यस वर्षको मकर सक्रान्तिमा पूजा पाठ, स्नान र दानको विषेश महत्व रहेको छ। जसको शुभ साइत बिहान ८ बजेर ४५ मिनेटदेखि १० बजेर ४५ मिनेटसम्म रहेको छ। त्यसपछि सूर्यास्तसम्म सामान्य पुण्यकाल हुने गर्दछ। यो वर्षको मकर सक्रान्तिमा सूर्य, शनि, गुरु, बुध र चन्द्रमा मकर राशिमा रहनेछन्। पाँच ग्रह एकै राशिमा गोचर हुनुलाई निकै शुभ योग मानिन्छ। यस दिन गरेको दान र स्नान जीवनका लागि निकै पुण्य फलदायी हुने बताइन्छ। मकर सक्रान्तिका लागि
काठमाडौं। सुपरममको रुपमा चर्चित एक महिला फेरि गर्भवती भएकी छिन् । अब उनले जन्माउने बच्चा २२ औं हुनेछ । उनले यसअघि नै २१ सन्तानलाई जन्म दिइसकेकी छिन् । ४४ वर्षकी यी महिला बेलायतकी हुन् । डेलिमेलको रिपोर्टअनुसार सु रेसफोर्ड र उनका पति ४८ वर्षका नोएलको परिवारलाई बेलायतको सबैभन्दा ठूलो परिवार मानिन्छ । एक युट्युब भिडियोमा महिलाले अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट देखाउँदै आफू गर्भवती भएको घोषणा गरिन् । रेडफोर्डको परिवार बेलायतको मोरेक्याम्बेमा बस्छन् । पछिल्लो समय सुले २०१८ मा २१ औं सन्तान जन्माएकी थिइन् । सुले बताएअनुसार अहिले उनी १५ महिनाकी गर्भवती छिन् र उनलाई यसबाटक आफूले छोरा जन्माउँछु भन्ने लागेको छ । सुका अनुसार यदि यसपटक छोरा जन्मिएका उनको परिवारमा ११ छोरा र ११ छोरी हुनेछन् । यो परिवारको खर्च पारिवारिक बेकरीको व्यवसायले धानेको छ । १० कोठे घरमा सबै बस्छन् । ९ औं बच्चा जन्मिएपछि नोएलले स्थायी
काठमाडौँ । आज हामी तपाईहरुलाई कस्ता महिलाहरु बढी पबित्र हुन्छन भन्ने कुरा बताउन जाँदैछौ। नेपाली वर्णमाला अनुसार ४ अक्षर बाट नाम सुरु हुने केटीहरु बढी पबित्र हुने कुरा बताइएको छ। यी ४ अक्षर बाट नाम सुरुहुने व्यक्तिहरु परिवारमा सबैको रोजाईमा पर्ने र समाजमा पनि आफ्नो नाम कमाउन् सक्छन। “R” बाट नाम सुरुवात हुने केटीहरु एकदम सुन्दर र भाग्यमानी हुने गर्छन। उनीहरु जस्तोसुकै वाताबरणमा पनि रमाउन जान्दछन्। यी महिलाहरु सधैं आफ्नो पति र परिवारको इज्जत जोगाउन सधै साथमा रहने गर्छन। यिनीहरु आफ्नो परिवारमा सधैब खुशी राख्न तल्लिन हुन्छन। “T” बाट नाम सुरुहुने महिलाहरुले समाजमा भलाई कामका बापत धेरै सम्मान पाउने गर्छन। उनीहरु सधै सबैलाई खुशि राख्न सक्छन। यी महिलाहरु धेरैनै सुन्दर र भाग्यमानी हुन्छन। उनीहरु बिहे पश्चात आफ्नो श्रीमानको घरमा आफ्नो शासन जमाएर बस्न सक्छन। “P” बाट नाम सुरुहुने महिल
काठमाडौँ– भनिरहनु पर्दैन जन्म र मृ,त्यु भनेको यो संसारकै शाश्वत सत्य हो । जो जन्मिन्छ, उसको एक न एक दिन मृत्यु निश्चित छ ।मृ,त्युलाई कसैले नकार्न सक्दैन । कोही पनि मानिस चाँडै मर्न चाहँदैन । यसैबीच भारतको उत्तर प्रदेशमा काशीमा एक भवन बनाइएको छ । यसको निर्माण १९०८ मा भएको थियो । यसलाई मुक्तिका भवनको नामले जान्ने गरिन्छ । त्यहाँ एउटा किताव यस्तो छ कि, जसमा आउने र जानेको नाम दर्ता गरिन्छ ।त्यहाँ केहि मानिस वर्षभर बस्नको लागि समेत जाने गर्दछन् । त्यहाँका मानिस मर्नको लागि जाने गर्छन् । उनीहरुको २ हप्तामा मृत्यु हुने गरेको बताइएको छ ।